Embassy yeUAE muIsrael iparadigm nyowani yerunyararo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Embassy yeUAE muIsrael iparadigm nyowani yerunyararo
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Israel Breaking News • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kusimudza mureza weUAE muIsrael
Nguva pfupi yapfuura Israeri haina kana kuratidzwa pamepu dzepamutemo muUnited Emirates. Nhasi uno UAE yakavhura mumiriri wayo muTel Aviv, Israel, ichizviti paradigm nyowani yerunyararo.
United Arab Emirates yakatsaurira mumiriri wayo muTel Aviv
Uku kungori kutanga. Mune yedu yepashure-COVID yenyika, avo vanogadzira vachatungamira.
Mutungamiri weIsrael Isaac Herzog akabatana nemumiriri weUAEMohamed Al Khaja mukucheka ribhoni kuvhura mumiriri.
United Arab Emirates yakatsaurira mumiriri wayo muTel Aviv.
"Embassy iyi haingoshandi semusha wevamiriri chete asi hwaro hwebasa redu rekuenderera mberi nekuvaka pahukama hwedu hutsva, kutsvaga kutaurirana, kwete kupokana, kuvaka gwara idzva rerunyararo, uye kupa muenzaniso weiyo nyowani nzira yekudyidzana yekugadzirisa gakava kuMiddle East, ”Mumiriri weAUMohamed Al Khaja akadaro neChitatu mangwanani pamberi pehofisi itsva, iri muchivako cheTel Aviv Stock Exchange.
"Kubva zvakagadziriswa hukama pakati peIsrael neUAE, takaona - kwenguva yekutanga - nhaurirano pamusoro pemikana yekutengeserana neyekudyara, kubatana pakati pezvipatara, mayunivhesiti nenzvimbo dzekutsvagisa, tsika dzekuchinjana kwevanhu nevevanhu, kubatana mukurwisa COVID-19, kurwisa kutyisidzirwa kwekyber, uye kuchengetedza nharaunda yedu. Takasaina zvibvumirano zvikuru munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira hupfumi, kufamba nendege, hunyanzvi uye tsika nemagariro, ”akadaro Khaja.
“Uye aya angori mavambo. Munyika yedu yapashure pe COVID, avo vanogadzira zvinhu vachatungamira, "akadaro zvakare, achiwedzera kuti:" IUAE neIsrael nyika mbiri dzinovandudza. "
Lufthansa inosvitsa IT mhinduro yekusimudzira ...
Kutonga kweUS Kwakanganiswa? B737 Max Vakatambudzwa havana mukana ...
Air France inoedza IATA Travel Pass paMontreal-Paris ...
Russian Convention Bureau Inozivisa Nyowani CEO
Royal Caribbean izere nekumhanya kumberi kunyangwe mushure memaviri ...
Ramangwana Rakanaka reSeychelles Tourism yakagadziriswa nhasi ...